Pacific-AA Online Shop | Pacific Beautex Baby Rash Cream Detail
Pacific Beautex Baby Rash Cream
UOM: 50g Tube
shea butter နှင့် panthenol ပါဝင်သော ကလေးငယ်များအတွက် အကောင်းဆုံး ယားယံမှုနှင့်ဓါတ်မတည့်မှုများ ကိုသက်သာစေသော Baby Rash Cream ဖြစ်သည် ။
- ဒိုက်ပါကြောင့်ဖြစ်သော ယားယံအကွက်များ အပူလောင်ခြင်းများကိုသက်သာစေပြီးမဖြစ်စေရန်ကာကွယ်ပေးခြင်း
- ချောမွေ့ပြီး အရေပြားအစိုဓါတ်ကို ထိမ်းထားပေးခြင်း
- ခြောက်သွေ့ပြီး နူးညံ့သော အရေပြား များအတွက် လိမ်းပေးနိုင်သည်
- အရေပြားကိုကာကွယ်ပေးပြီး ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ခြင်းကိုနည်းစေသည် ။
စိုနေသော ညစ်ပေသော ဒိုက်ပါကို ချက်ခြင်းလဲပါ ။ ပြီးနောက်ဒိုက်ပါဝတ်သော နေရာအား သန့်စင်အောင်ဆေးကြောပါ ။ ပြီးနောက်အခြောက်ခံပါ ။ လိုအပ်သလို baby rash cream ကို ညီညာစွာဖြင့် နေ့ရောညပါ လိမ်းနိုင်ပါသည် ။ အကယ်၍ ဒိုက်ပါလောင်ကွက်များ သက်သာပါက အသုံးပြုခြင်းအားရပ်နိုင်ပါသည် ။
D.I Water , Mineral Oil .
Glycerin , Stearyl Alcohol , Polysorbate 60 .
Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Butyrospermum Parkii (Shea)Butter, .
Panthenol, Sorbitan Sesquioleate, Dimethicone, Arbutin , Allantoin , Tocopheryl Acetate .
Carbomer, Triethanolamine, Adenosine , Methylparaben, Propylparaben .
အေးမြ၍ ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်ထားပါ ။ အလင်းရောင်နှင့်တိုက်ရိုက်မထိစေရန်ကာကွယ်ထားပါ ။ ကလေးငယ်များ နှင့်ဝေးသောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းပါ ။
ဤလိမ်းဆေးတွင်ပါဝင်သောအရာများနှင့်ဓါတ်မတည့်ပါက ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နှင့်သာ လိမ်းသင့်ပါသည် ။